Sei kunyora chinovhara Apple TV 4 | IPhone nhau
Pablo Aparicio | | Apple tv, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Chizvarwa chechina Apple TV ichatibvumidza isu kuti tiite zvakawanda kupfuura shanduro dzekare nekuda kweayo App Store. Mune ramangwana risiri kure kwazvo isu tichakwanisa kuita chero chinhu uye iwe ungangoda kunyora zvimwe zvacho. Tinogona kupa pachena kuzvidzora pakufungidzira kwedu, asi chimwe chezvinhu zvekutanga izvo zvinouya pakarepo mupfungwa ndeyokunyora mitambo yedu kumitambo yatinayo paTVOS. Kana ichi chatova chinhu chinonakidza muIOS, mune iyo Apple TV 4, iyo yatinoyeuka inoenderanawo neMFi zvinodzora (Yakaitirwa iPhone - yakagadzirirwa iPhone), zvinoita zvine musoro. Pano tinokuudza zvaunofanira kuita rekodhi Apple TV skrini 4.
Maitiro ekunyora Apple TV 4 skrini
Isu tinobatanidza Apple TV yedu neiyo USB-C tambo kuMac uye kune yekubuditsa magetsi netambo yayo inoenderana.
Isu tinoibatanidza zvakare kuTV yedu neiyo HDMI tambo (zvikasadaro, hazvishande. Kanenge mune yangu kesi).
PaMac, tinovhura Isikuru mutambi.
Isu tinoenda kumenyu uye sarudza New Screen kurekodha.
Muhwindo rinovhura, padyo nekodhi bhatani, tinodzvanya uye tinosarudza yedu Apple TV zvese zviri zviviri kamera uye maikorofoni. ONA: unofanirwa kuwedzera vhoriyamu zvakare (kubva kubhawa padhuze nekodhi bhatani) kana isu hatizorekodhi ruzha.
Tinodzvanya pane bhatani rekodhi.
Iyi nzira yakafanana neyaishandiswa kunyora iyo iPhone skrini, asi mune yayo kesi isu tinofanirwa kushandisa Mheni tambo uye hazvidiwe kuti ubatanidze iyo HDMI kana kuibatanidza kune magetsi. Izvi zvinogoneka kubva kuIOS 8. Tisati taifanirwa kushandisa yechitatu-bato kunyorera senge Reflector kana zvimwe zvikumbiro zvaingowanikwa chete kuburikidza nekuputsika kwejeri, asi Apple yakatipa iyo diki diki kwete kare kare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple tv » Maitiro ekunyora rekodhi yeApple TV 4 [Mac]
Iyo iPhone 7 Plus ichave iine 3GB ye RAM uye 4 "modhi inosvika.